Manchester United oo guul daro xanuun badan kala kulantay Everton xili hamigoodii kaalmaha afarta sare uu god mugdi sii galay +Sawiro – Gool FM
( Engand )21 Abriil 2019 Kooxda Manchester United ayaa guul daro xanuun badan kala kulantay Kooxda Everton ciyaar ku soo dhamaatay 4-0 oo ka tirsaneed horyaalka Premier league.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa Koowaad ayaa waxa uu ku soo idlaaday 2-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Everton oo ka ciyaar wanaagsaneed Kooxda Manchester United.
Manchester United ayaa qaab ciyaareed aad u liita ku soo gashay bilowgii qeebtii hore, waxaana aad u liitay isku xirkooda khadka dhexe iyo weerarka taas oo sababtay in labo gool laga dhaliyo qeebtii hore.
Laacibka reer Barazil ee Richarlison ayaa dhaliyey goolka koowaad ee ciyaarta daqiiqadii 13-aad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay Calvert-Lewin.
United oo uu xaalka ku xun yahay misane wax fursado halis ah aan abuurin kulanka ayaa mar kale daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta laga dhaliyey goolka labaad ee ciyaarta waxaa goolkaas ka dhaliyey Sigurdsson.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday 2-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Everton, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Everton oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa aheyd mid halkeeda ka sii wadata qaab ciyaareedkeedii cajiibka ahaa iyaga oona la yimid goolkii sedexaad ee ciyaarta kaas oo uu dhaliyey Digne daqiiqadii 56-aad ee ciyaarta.
Taageerayaasha United ayaa la fa jacay ciqaabta ku dhaceysa wiilashooda oo xitaa awoodi waayey in kubada ay heestaan daqiiqo dhowr ah, iskaba daayee in ay goolka gaaraan.
Daaiiqadii 64-aad ee ciyaarta waxaa yimid goolkii rajo beelka ku riday Manchester, kubad caawinteeda uu lahaa Sigurdsson waxaa gool u badalay laacibka xawaaraha badan ee Walcott.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo idlaaday 4-0 oo ay guushu ku raacday Kooxda Everton oo cashar lama ilawaan ah u dhigtay United.